ပွဲစဉ်(၉)အပြီးအထိ (၃)သင်း ရှုံးပွဲမရှိတာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးပါပဲ
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီကလို ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်မှာ Invincible အသင်း ပေါ်ထွက်လာမလား
28 Oct 2018 . 5:07 PM
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီတုန်းက အာဆင်နယ်အသင်း တစ်ရာသီလုံး ရှုံးပွဲမရှိဘဲ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေ မေ့လောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အာဆင်နယ်အသင်းက ရှုံးပွဲမရှိ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး အဲဒီအတွက် Invincible Team ဆိုပြီး အားလုံးက သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက အာဆင်နယ်လိုပဲ ဒီရာသီမှာ နောက်ထပ် Invincible Team ထပ် ပေါ်ထွက်လာဦးမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက စံချိန်မှတ်တမ်းသစ်တွေနဲ့ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အာဆင်နယ်ရဲ့ မှတ်တမ်းကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့ အခြေအနေကောင်းခဲ့ပေမယ့် (၂၂)ပွဲမြောက်၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲမှာ ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်က အရောင်ပြယ်လွင့်ခဲ့ရတယ်။
အခုလောလောဆယ် ပရီးမီးယားလိဂ်က ပွဲစဉ်(၁၀)ပဲရှိသေးလို့ Invincible Team ဘယ်သူလဲဆိုတာ ပြောဖို့ စောနေသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လီဗာပူးလ်၊ မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့ဟာ ရှုံးပွဲမရှိသေးဘဲ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနေတာကြောင့် ဒီ(၃)သင်းထဲက တစ်သင်းသင်းများ ရှုံးပွဲမရှိ ဗိုလ်စွဲမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါပဲ။
ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် (၃)သင်း ရှုံးပွဲမရှိသေးတာက ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ အရင် အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတုန်းက ၁၉၇၈-၇၉ ရာသီမှာ ပွဲစဉ်(၉)အပြီး လီဗာပူးလ်၊ အဲဗာတန်၊ နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်တို့ ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘဲ လီဗာပူးလ်အသင်း ဗိုလ်စွဲခဲ့တယ်။ (၁၂)နှစ်အကြာ ၁၉၉၀-၉၁ ရာသီမှာ လီဗာပူးလ်၊ အာဆင်နယ်၊ စပါး၊ ပဲလေ့စ် (၄)သင်းအထိ ပွဲစဉ်(၉)အပြီး ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘဲ အာဆင်နယ်အသင်းက အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။
အစဉ်အလာတွေအရဆိုရင်တော့ ပွဲစဉ်(၉)အပြီး ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ (၃)သင်းထဲက တစ်သင်းသင်း ချန်ပီယံဖြစ်လေ့ရှိလို့ ဒီနှစ်မှာလည်း လီဗာပူးလ်၊ မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီးတို့ထဲက တစ်သင်း ဗိုလ်စွဲနိုင်ခြေများနေတယ်။ လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့ ရလဒ်တွေအရလည်း ချန်ပီယံဆုကို မန်စီးတီး ဆက်ထိန်းနိုင်မယ့်အခြေအနေပါပဲ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကာလက (၃)ပုံ (၁)ပုံ နီးပါးရောက်လာပါပြီ။ ဒီ(၃)သင်းထဲက ဘယ်သူ ဗိုလ်စွဲမလဲ၊ အာဆင်နယ်လို Invincible Team ထပ်ပေါ်လာဦးမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
Photo:deportes.televisa,FOX Sports Asia,
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီကလို ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂျမှာ Invincible အသငျး ပျေါထှကျလာမလား
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီတုနျးက အာဆငျနယျအသငျး တဈရာသီလုံး ရှုံးပှဲမရှိဘဲ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံ ဖွဈခဲ့တာကို ပရိသတျတှေ မလေ့ောကျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ အာဆငျနယျအသငျးက ရှုံးပှဲမရှိ ဗိုလျစှဲခဲ့ပွီး အဲဒီအတှကျ Invincible Team ဆိုပွီး အားလုံးက သတျမှတျခဲ့ကွတယျ။
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက အာဆငျနယျလိုပဲ ဒီရာသီမှာ နောကျထပျ Invincible Team ထပျ ပျေါထှကျလာဦးမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးလာပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက စံခြိနျမှတျတမျးသဈတှနေဲ့ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ အာဆငျနယျရဲ့ မှတျတမျးကို အမီလိုကျနိုငျဖို့ အခွအေနကေောငျးခဲ့ပမေယျ့ (၂၂)ပှဲမွောကျ၊ လီဗာပူးလျနဲ့ပှဲမှာ ရှုံးပှဲတှခေဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြက အရောငျပွယျလှငျ့ခဲ့ရတယျ။
အခုလောလောဆယျ ပရီးမီးယားလိဂျက ပှဲစဉျ(၁၀)ပဲရှိသေးလို့ Invincible Team ဘယျသူလဲဆိုတာ ပွောဖို့ စောနသေေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ လီဗာပူးလျ၊ မနျစီးတီး၊ ခယျြလျဆီးအသငျးတို့ဟာ ရှုံးပှဲမရှိသေးဘဲ ရလဒျကောငျးတှေ ရယူနတောကွောငျ့ ဒီ(၃)သငျးထဲက တဈသငျးသငျးမြား ရှုံးပှဲမရှိ ဗိုလျစှဲမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာပါပဲ။
ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ (၃)သငျး ရှုံးပှဲမရှိသေးတာက ဒါ ပထမဆုံးအကွိမျပါ။ အရငျ အင်ျဂလနျအမှတျပေးပွိုငျပှဲတုနျးက ၁၉၇၈-၇၉ ရာသီမှာ ပှဲစဉျ(၉)အပွီး လီဗာပူးလျ၊ အဲဗာတနျ၊ နျောတငျဟမျဖျောရကျဈတို့ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘဲ လီဗာပူးလျအသငျး ဗိုလျစှဲခဲ့တယျ။ (၁၂)နှဈအကွာ ၁၉၉၀-၉၁ ရာသီမှာ လီဗာပူးလျ၊ အာဆငျနယျ၊ စပါး၊ ပဲလစျေ့ (၄)သငျးအထိ ပှဲစဉျ(၉)အပွီး ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘဲ အာဆငျနယျအသငျးက အမှတျပေးခနျြပီယံဖွဈခဲ့တယျ။
အစဉျအလာတှအေရဆိုရငျတော့ ပှဲစဉျ(၉)အပွီး ရှုံးပှဲမရှိတဲ့ (၃)သငျးထဲက တဈသငျးသငျး ခနျြပီယံဖွဈလရှေိ့လို့ ဒီနှဈမှာလညျး လီဗာပူးလျ၊ မနျစီးတီး၊ ခယျြလျဆီးတို့ထဲက တဈသငျး ဗိုလျစှဲနိုငျခွမြေားနတေယျ။ လကျရှိခွစှေမျးနဲ့ ရလဒျတှအေရလညျး ခနျြပီယံဆုကို မနျစီးတီး ဆကျထိနျးနိုငျမယျ့အခွအေနပေါပဲ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကာလက (၃)ပုံ (၁)ပုံ နီးပါးရောကျလာပါပွီ။ ဒီ(၃)သငျးထဲက ဘယျသူ ဗိုလျစှဲမလဲ၊ အာဆငျနယျလို Invincible Team ထပျပျေါလာဦးမလားဆိုတာ စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .